Mgbe afọ 18 gachara na Google na mkpụrụedemede, Eric Schmidt gbara arụkwaghịm n'ọkwa ya | Androidsis
Afọ 18 na Google na Alphabet, Eric Schmidt gbara arụkwaghịm n'ọkwa ya
Mkpụrụedemede mara ọkwa mara ọkwa na Eric Schmidt, onye otu ndị isi nchịkwa nke Alphabet ugbu a na onye isibu Google Ọ gaghị eguzo maka nhọpụta, mgbe oge ya gwụ na June 19. Mgbe ọ nọrọ afọ 18 ikpeazụ nke ndụ ya n'okpuru nche anwụ nke Google, ụlọ ọrụ ọ sonyere na 2001.
Na Disemba 2017, Eric enyelarị ihe mbu nke ihe gaje ibia rubere arụkwaghịm ya dị ka onye isi nke Alphabet. Ihe niile yiri ka ọ na-egosi nke ahụ ị na-echeworị banyere ezumike nká gị. Olileanya na ọ ga-agbaso otu ụzọ ahụ dị ka nnukwu ndị isi ndị ọzọ dị ka onye nchoputa Microsoft bụ Bill Gates ma kpebie itinye akụkụ nke akụ ya na ọrụ ebere.
Onye isi oche Board John Hennessy kwuru na:
Eric enyela onyinye pụrụ iche na Google na Alphabet dị ka onye isi ala, onye isi ala na onye otu Board of Directors. Anyị nwere ekele dị ukwuu maka nduzi gị na ndu gị kemgbe ọtụtụ afọ.
Eric Schmidt bụ onye amara nke ọma maka ọrụ ya dị ka onye isi nke Google site na 2001 ruo 2017, dị ka onye isi nke Google site na 2011 ruo 2015, yana onye isi nke Alphabet site na 2015 ruo 2017. Mana na mgbakwunye, ọ rụọla ọrụ na ndị isi oche nke Apple kemgbe 2006 ruo 2009, mana a manyere ya ịhapụ ọkwa ya mgbe agha dị n'etiti iOS na gam akporo malitere.
Mgbe afọ iri abụọ na asatọ nke mtgs, m na -eso ihe nketa onye nkuzi Bill Campbell & na -enyere ọgbọ na -esote talent aka ije ozi. Ekele dịrị Larry, Sergey na ndị ọrụ ibe m BOD niile! Gaa n'ihu maka m dị ka onye ndụmọdụ nka ka ọ bụrụ onye nchịkwa mkpụrụedemede na azụmaahịa / teknụzụ Google, gbakwunyere… ..
Tupu ọ banye na Google, Eric bụ onye isi nke Novell site na 1997 ruo 2001. Na mbụ, ọ na-arụ ọrụ dị ka injinia ngwanrọ na Sun Microsystems. Eric n'onwe ya kwadoro ọpụpụ ya na akaụntụ Twitter ya ebe nwere ekele maka ntụkwasị obi Larry Page na Sergey Brin nyere ya, tumadi, mgbe ha tụkwasịrị ya obi ka ọ rụọ ọrụ Google.
Mgbe ọ hapụsịrị ọrụ ya na ụlọ ọrụ ahụ, ọ ga - abụ onye ndụmọdụ ụlọ ọrụ, mana na - enweghị ikike ịme mkpebi dịka ọ ga - enwe ruo June 19, mgbe ọpụpụ ya na ụlọ ọrụ ga-adị irè.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Afọ 18 na Google na Alphabet, Eric Schmidt gbara arụkwaghịm n'ọkwa ya
Samsung na-arụ ọrụ na igwefoto a na-adịghị ahụ anya n'okpuru ihuenyo ahụ
The Lenovo Z6 Pro na-enweta nnukwu mmelite na ihe ọhụrụ dị mkpa